Tababre Pep Guardiola Oo Mourinho Ku Garaacay Saxiixa Xidiga Kooxda Shakhtar Donetsk Ee Fred Iyo Xidig Hore Oo Arsenal Ah Oo Man City Gacan Siiyay. – GOOL24.NET
Tababre Pep Guardiola Oo Mourinho Ku Garaacay Saxiixa Xidiga Kooxda Shakhtar Donetsk Ee Fred Iyo Xidig Hore Oo Arsenal Ah Oo Man City Gacan Siiyay.
February 8, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxda Manchester City ayaa dariskeeda Manchester United ku garaacday saxiixa xidiga ree Brazil iyo kooxda Shakhtar Donetsk ee Fred. Suuqii xidhmay ee bishii January ayay Pep Guardiola iyo Jose Mourinho ku tartamayeen saxiixa Fred iyada oo macalinka ree Portugal uu doonayay in qaabkii Alexis Sanchez uu Fred uga afduubo Man City laakiin xidigii hore ee kooxda Arsenal ee Gilberto Silva uu sabab wayn u noqday in Fred uu Man City doortay.
Manchester City ayaa si wayn u doonaysay in Fred ay Etihad Stadium keento suuqii bishii January laakiin kooxda Shakhatar ayaan diyaar u ahayn in xidiga ree Brazil uu kooxdeeda ka baxo badhtamaha xili ciyaareedkan waxayna u sheegtay in uu sugo ilaa dhamaadka xili ciyaareedkan.
Laakiin haddaba journalistaha ree Portugal ee Marcus Alves ayaa cadeeyay in Manchester City ay heshiis la sii gaadhay Fred iyada oo 50 milyan oo gini ka soo bixin doonta wuxuuna heshiiskani albaabka ka soo xidhay Jose Mourinho iyo kooxdiisa Man United oo diyaar u ahaa in ay City dagaal xoogan kula galaan saxiixa Fred.
Xidiga ree Brazil iyo kooxda Shakhtar ee Fred ayaa caawin ka helay xidigii hore ee kooxda Arsenal ee Gilberto Silva kaas oo ka caawiyay in uu qaato go’aanka uu heshiiska kula sii galay Manchester City. Gilberto Silva ayaa Fred u sheegay in si uu waayo ciyaareed oo fiican u qaato in uu doorto Manchester City.
Dhinaca kale tababarihii hore ee kooxda Shakhtar ee Mircea Lucescu ayaa hubaal ka dhigay in Fred uu dhamaadka xili ciyaareedkan ku biirayo Manchester City iyada oo haddaba Gaurdiola uu gacanta ku sii dhigay saxiixa kowaad ee dhamaadka xili ciyaareedkan uu la soo saxiixan doono marka uu suuqa xagaagu furmo.
Fred ayaa kooxda Shakhtar ku soo biiray sanadkii 2013 kii wuxuuna ahaa badalka tooska ah ee Fernandinho kaas oo uu markale Guardiola doonaya in uu ka dhaxlo booskiisa Etihad Stadium. Mircea Lucescu oo markaas macalin ka ahaa kooxda Shakhtar ayaa sheegay in Fred uu yahay xidiga ugu fiican kooxdiisii hore ee Shakhtar balse uu Man City ku biiri doono.
Waraysi uu bixiyay Fred intii ayna Manchester City heshiiska la gaadhin ayuu ku sheegay in uu diyaar u yahay sidii uu Guardiola uga hoos shaqayn lahaa wuxuuna si aan gabasho lahayn uu u cadeeyay in uu sugayo waqtiga uu Guardiola la soo hadli doono taas oo hadda u muuqata in Guardiola iyo Fred ay si cad wax iskula meel dhigteen.